Dawlada Puntland iyo dawlada federaalka ah ee Somaliya oo heshiis ku kala sixiixday Nairobi. – Radio Daljir
Abriil 12, 2010 12:00 b 0
Nairobi, Apr 12 – Waxaa maanta lagu kala saxiixday hutel Safari Park ee Nairobi heshiis is afgarad oo dhex maray maamulka Puntland iyo xukuumadda federalka ku meel gaarka ah ee Somaliya; heshiiskaas oo daba socday heshiiskii ay kal hore labada maamul ku kala saxiixdeen magaalada Gaalkacayo, ayaa ujeedadiisu ahayd:
1- In la xoojiyo sharciga iyo kala dambaynta bad iyo berigaba,
2- In dib loo dhiso, lana habeeyo ciidanka aminiga ee dalka (ciidamada badda ee la dagaalama burcad badeeda, saldhigna looga dhiga Puntland),
3- In shaqo loo abuuro dadka shaqo la’aantu hayso (gaar ahaan dadka xeebaha ku teedsan),
4- In laga sifeeyo xeebaha dalka wasakhda (gaar ahaan xeebaha Puntland),
Kulankaas ayaa waxaa ka soo qaybgalay hay’adaha iyo dawladaha daneeya arrimaha Somaliya oo ay ka mid yihiin Talyaaniga, Swedan, Spain, France, wakiilka EU-da u fadhiya Nairobi, iyo wakiilka Jamciyadda Quruumaha ka dhexaysa u qaabilsan arrimaha Somaliya Wallad Cabdalla.
Dawladda Puntland iyo TFG-da ayaa waxaa u kala saxiixay heshiiska Wasiirada Arrimaha Gudaha ee Puntland Gen. Cabdulahi Axmed Jamac (Ilka jiir) iyo Wasiirka Gaashaandhiga ee dawlada federaalka ah Cabdalla Boos; waxaana goobjoogayaal ka ahaa Madaxwaynaha Dawladda Puntland Cabdiraxman Maxamed Maxamud (Faroole) iyo Ra’isal wasaare ku xigeenka TFG-da Sharif Xasan.
Dhamaan masuuliyiintii ka hadashay kulankaan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin, kuna bogaadinayaan labada dhinac heshiiskaan is afgarad ee dhaxmay Puntland iyo TFG-da, kaas oo ah talaabo loo qaaday xaga horumarka dib u heshiisiinta Soomaalida.
Xafiiska Madaxweynaha Puntland
Dawlada Puntland ee Somaliya.